Jabuuti oo u dabaal degeysa Maalinta xornimada Dalkeeda ee 27-ka June – Radio Muqdisho
Jabuuti oo u dabaal degeysa Maalinta xornimada Dalkeeda ee 27-ka June
Dalka Jabuti ayaa xalay looga dabaal dagay Sanad guurada 41-aad ee ka soo wareegtay markii ay Jabuti ka xorowday gumaystihii Faransiiska 27/6/1977-kii.
Munaaabadda oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qayb galay madaxwaynaha Dalkaas Ismaaciil Cumar Geelle, madax ka socota Soomaaliya oo uu hoggaaminayey Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Xuska 27-June ee xalay ka dhacay Jabuuti ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay Safiirrada Waddamada shisheeye u jooga Jabuuti, waxaa lagu soo bandhigay Taariikhda halganka Jabuuti , taasoo xornimadeeda ka dib samaysay horumar dhinacyo badan taabanaya.
Dhinaca kale Safiirka Soomaaliya u fadhiya Jabuuti Xasan Aaden Xasan,oo la hadlayay warbaahinta Qaranka ayaa ka sheekeeyay tacaddiyadii uu gumeystaha Faransiiska u geystay shacabka Reer jabuuti, kana xidhay dhegaha iyo Indhaha si anay wax u arag una maqal, balse taasi ay u suuroobi weyday Isticmaarku iyagoohalgan dheer ka dib iska dul qaaday heeryadii Gumaysiga.
Danjiraha ayaa ammaanay Ragga hormuudka u ahaa gobanima doonka Jabuuti iyo Shacabkii kaalinta weyn kasoo qaatay, wuxuuna ugu hambalyeeyay Dadka reeer Jabuuti Sanad guurada 41-aad ee xornimada Dalkooda Hooyo.
Taxahana Taariikhda Maalmaha Xoriyadda Soomaalida (Jabuuti)
NUSOJ oo kaashaneysa Midowga Yurub oo Muqdisho ka daahfurtay tababarro socon doona 2-Sano